Ukulungisa iinwele, i-hairspray okanye i-gel? | Amadoda aQinisekileyo
Ukuba zikumgangatho, iintsini kunye neelacquers zisivumela ukuba sigcine iinwele zethu zilungile nakweyona mihla mide yokusebenza. Ukongeza, kumaxesha akutshanje ezi mveliso ze- iinwele Babandakanya izithako kwifomula yabo yokondla kunye nokomeleza iinwele, ngokufutshane, ukuyenza ibe sempilweni.
Iigummies kunye ne-lacquers zabelana ngenjongo enye: ukusinceda sichaze kwaye lungisa iinwele. Nangona kunjalo, iziphumo azifani, kwaye kule nqaku sikunika isandla ukuze wazi ukuba uza kuyisebenzisa nini nganye.
1 Lungisa iinwele nge-hairspray
2 Lungisa iinwele ngejeli
Lungisa iinwele nge-hairspray
La lacquer ivumela intshukumo ethile, kuxhomekeke kumandla ayo. Abavelisi bahlala beyenza ngamanqanaba ohlukeneyo okulungiswa. Ukongeza, ufumana ubambiso lwendalo kwaye uninzi lususwa ngokulula ngokuxubha.
Sebenzisa i-hairspray ukuze ufumane iinwele ngevolumu kunye nentshukumo. Ukuba iinwele zakho zinde kwaye zinde kakhulu, i-hairspray yimveliso ekufuneka uyenze kwizinwele zakho ukuseta iinwele zakho.
Lungisa iinwele ngejeli
La gummy Yeyona nto yokulungisa yomeleleyo ikhona. Ukongeza ekunikezeleni inkcazo epheleleyo-iyasivumela ukuba senze nantoni na esinokucinga ngayo ngeetshixo zethu - ikwabonakaliswa ngokongeza ukukhanya kweenwele.
Sebenzisa itshungama ukufumana iinwele ezimakwe kakuhle kunye nobungqina bombhobho. Ukuba ubude beenwele zakho bufutshane okanye buphakathi, ijeli yimveliso ekufuneka uyisebenzisile kwizinwele ukulungisa iinwele zakho. Khumbula ukuba ngumlingani ogqibeleleyo wokwahlula-hlula, ukujonga kakuhle kweenwele ezimfutshane phakathi kwamadoda.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Ngaba ulungisa iinwele nge-hairspray okanye i-gel?
Zeziphi iilwandle ezilungileyo e-Itali?